FBC - Mootummaan naannoo Oromiyaa qormaatni nagayaan akka laatamu qophii xumureera jedhe
Mootummaan naannoo Oromiyaa qormaatni nagayaan akka laatamu qophii xumureera jedhe
Finfinnee, Caamsaa 16,2008(FBC) - Qormaata biyyaalessaa gufachiisuuf yaaluun dorgomummaa sirna federaalizmii keessatti ummatni Oromoo qaburratti rakkoo qaba jedhe Biiron Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibsa haala yeroorratti baasen.
Biirichi biyyattiin biyya waggoota dheeradhaaf saboonni sablammoonii fi ummattoonni cunqursaa hammaataa, duubatti hafummaa fi hiyyummaa keessatti kufanii kan itti turan ta’uu yaadachiisera.
Keessumaa ammoo ummatni Oromoo cunqursaa dachaa irra tureen, eenyummaan sabummaasaa dhokatee biyya ofiisaa ijaare keessatti akka lammii lammaffaatti akka ilaalamu sirna gita bittootatiin itti murtaa’ee ture jedha.
Carraa barnootaa akka hin arganne karaa hundaan karra itti cufaa kan turan sirnootni kun ummatni kun dammaqinni sammuusaa yoo dabale isaaniif sodaa akka ta’e yeroo addaddaa ifatti kaasaa turan.
Sirna cinqurssaa sana yeroo dhumaaf dhabamsiisuuf qabsoon ummatni Oromoo sabootaa fi sablammoota biroo wliin taasise injifannoodhan xumuramee Caamsaa 20/19883 irraa kaasee gaaffileen gama hundaan kaasaa tures guutummaatti akka deebi’uuf ta’eera jedhe Biiron Dhimmoota Koomuniikeeshinii ibsa isaatin.
Aarsaa lubbuu ilmaansaa kanfalaniin afaansaan baratee, seenaasaa qoratee, teeknoolojii addunyaarraa waraabee daandii badhaadhinaatti cehuuf imaluudhaaf kan isa dandeesisu sirna federaalawaa dimokraatawaa fedhiisaatiin ijaarrachuus himeera.
Gama barnootatiin bu’aawwan waggoottan 25’n darban keessa galmaa’an hirmaanna ummata oromoo fi mootummaa isaatiin akka ta’e beekamaadhas jedhee, manneen barnootaa babal’isuudhaan lammiilee miiliyoonotaan lakkaa’aman carraa barnoota sadarkaa olaanaa akka argatan taasisuun kan danda’ame ta’uus kaasera.
Har’a kollejjootaa fi yunivarstiiwwan 45 akka biyyatti jiran keessaa yunivarstiiwwan 10 kan ta’an naannoo Oromiyaa keessatti argamu. Lammiileen askeessaa bahanis dirree hundatti dorgomaa akka jiran qabatamaan agarreerra.
Sirna darbe keessatti barattoota lakkoofsi isaanii miliyoona 2.1 ture, amma miliyoona 28rra ga’eera. Har’a waggaa tokko keessatti daa’imman miliyoona tokko ta’an carraa barachuu argataniiru. Ummata biyyattii keessaa %30 banoota irratti argama.
Fedhiin mootummaan lammiilen naannoo keessa jiraatan carraa barachuu, beekumsaan dagaaguu fi kalaqaan sammuusaanii dabalee dorgomaa ta’an baay’inaan horachuudhaaf qabu olaanaadha.
Kanaafis dirreen barnootaa kan nageenyi itti mirkanaa’efi fedhiin barachuu ilmaan Oromoo daran akka dabalu gochuuf qabu mirkaneesudhaaf tataafataa tureera. Taattaaffisaa kana ammas itti fufeera. Haa ta’u malee haalota yeroo garaagaraa uumamaniin dirreen baroota naanoo Oromiyaa iddoo muraasatti jeequmsi kan itti baay’atuu fi humnootni garaagaraa kayyoo isaaniirraa ka’uudhaanis damee kanarratti xiyyeeffachaa turuunsaanii beekamaadha.
Bara kanas gaaffilee bulchiisa gaariifi misoomaa ummatni bal’aan qabuun barataan Oromoo tasgabbaahee barnoota akka hin hordofne, bu’uraalee barnootaa maatiinsaa hirmaannaa ofiitiin ijaare mancaasuu keessatti akka hirmaatu taasifamaa tureera jedha biirichi.
Qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa, 10ffaa fi 12ffaa walduraa duubaan kennamu keessati gahumsaan hirmaachudhaan carraa dorgomummaa sirna federaalawaa fi dimokraatwaa fayyadamuudhaaf ummatnii fi caasaan barnootaa sadarkaan jiru tumsa olaanaa gochuurratti argamu jedheera Biiron Dhimmoota Koomuniikeeshinii ibsa haala yeroorratti baase kanaan.
Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa qormaatni kun karaa naga qabeessaa fi tasgabbaahadhaan akka fudhatamu qophii barbaachisaa ta’e hunda xumuruu yaadachiisee, qaamni hunduu hirmaannaa isaa taasisuu qabas jedheera.
Oduuwwan Biroo « Dhaabbata irkoo qabsoo Ummata Oromoo ta’e Dh.D.U.O	Hanni qormaata biyyaalessaa gantummaa fi egeree dhalootaarratti yakka aggaameme - mootummaan naannoo Oromiyaa »